China Ngwongwo igwe anaghị agba nchara bu ihe di nkpa maka ngwa ahia nke ugbo ahia na emeputa | Daren
N’elu ụgbọ mmiri na-ebugharị, ha nile juputara na ngwa, ya mere adaba maka ịnyagharịa. Accessoriesgbọ mmiri ọtụtụ ngwa, gụnyere igwe anaghị agba nchara Marine cable, n'agbanyeghị na ọ bụ naanị obere, obere ngwa, bụ nchekwa ụgbọ mmiri akụkụ dị mkpa na njem ahụ. Kedu ihe kpatara ị ga - eji kwuo mkpa nke akụkụ ndị a dị ka obere ụgbọ mmiri? Ka anyị kwuo okwu:
Dị ka mmadụ niile maara, na mpaghara ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ nke China, ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri, yana mmepe nke azụmahịa mba ụwa, ọnụego iji ụgbọ mmiri ahụ dị elu nke ukwuu, nke na-eme ka igwe anaghị agba nchara igwe anaghị agba nchara buru ibu, nwere ike ịsị mba bụ ụgbọ mmiri na-enweghị . Site n'iji eriri igwe anaghị agba nchara eriri eriri, nwere ike ịhapụ ụgbọ mmiri na-aga nke ọma, n'ihi na enwere ike iji obere akụkụ a kee, mkwado, dozie.
Na njem ahụ, ịdị arọ nke ụgbọ ahụ n'onwe ya siri ike, na-ama jijiji n'ihi ihu igwe nke ihu igwe. Ọ bụrụ na oge a enweghị eriri igwe anaghị agba nchara nwere ike ibute akụkụ ahụ na ọnọdụ mbụ ya, duga n'ọdụ ụgbọ mmiri ka ọ bụrụ nke a gbapụrụ agbapụ, nke a ga-enye ụgbọ mmiri dị ize ndụ, mana ọ bụrụ na eriri eriri igwe anaghị agba nchara, mgbe ahụ enwere ike mee ngwa ndị dị mkpa, site na ifufe na mmiri ozuzo, hapụ ịkwọ ụgbọ mmiri dị larịị.
Na ahịa ọtụtụ eriri mmiri mmiri na igwe anaghị agba nchara 304 l igwe anaghị agba nchara, 316 l igwe anaghị agba nchara na abụọ ndị ọzọ ala carbon austenitic anaghị agba nchara. Kedu ihe eji eji igwe anaghị agba nchara? Ma ọ bụ obere carbon austenitic anaghị agba nchara?
Anyị niile maara na igwe anaghị agba nchara nwere mgbochi ịka nká, mmebi mmebi ahụ, na-eguzogide okpomọkụ dị ala, ọ naghị adị mfe nchara, ya mere na uru, na 304 l igwe anaghị agba nchara na 316 l igwe anaghị agba nchara nwere ike iweta mmebi nke mmebi mmiri nke mmiri gburugburu. ion (ọkara), dịkwa mfe nhazi ịkpụzi, a ga-enwe intercrystalline corrosion mgbe ịgbado ọkụ na-eweta zoro ezo nsogbu. Ya mere, anyị họọrọ 304 l igwe anaghị agba nchara na 316 l igwe anaghị agba nchara Marine USB tie dị nnọọ mma
Ejiri ọtụtụ elele dị na igwe anaghị agba nchara na, gbakwunyere eriri nke na-adaba adaba, nke na-ejide ike, yabụ ọ bụghị naanị akụkụ nke ojiji ya n'ime ụgbọ ahụ, nwekwara ike iji ya na mmanụ, mmanụ, ikpo okwu, ụlọ, njem, piping, okpomọkụ ichebe, waya na USB, USB akwa, nkwukọrịta akụrụngwa, signage, ugbo, iga, ígwè n'ichepụta, electric ike, eletriki ngwa, ulo oru n'ichepụta, ọgwụ na ahụ ike, ike osisi, mmiri ara ehi osisi, chemical ụlọ ọrụ, ugbo elu, ụgbọ okporo ígwè, elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè , ụzọ ụgbọ oloko, ụlọ ọrụ ụgbọ ala na mpaghara ndị ọzọ.